Sidee looga hortagaa qallooca qoorta loo qoondeeyay shaatiga PoLo
Qaar badan oo ka mid ah ururada bulshada ayaa fiiro gaar ah u siinaya horumarintooda shirkadaha, iyo ahmiyada ay siinayaan dhismaha dhaqanka shirkadaha sidoo kale waxay u kordheen heerka istiraatiijiyadaha horumarinta shirkadaha. U-habeynta funaanadaha shirkadaha ayaa sidoo kale isbeddelaya isbeddelka xilliga ...
Habaynta shaadh dhaqameed shirkadeed
Markii aan qaabeyneyno shaatiyada dhaqanka, waxaan aad uga walaacsanahay qaabeynta qaabka iyo xulashada tikniyoolajiyadda daabacaadda. Xulashooyinka habka daabacaadda ee kala duwan ayaa sidoo kale leh kala duwanaansho ballaaran xagga soo bandhigidda saamaynta qaabka. Qaab caadi ah oo caadi ah, haddii aad doorato saxaro ...
Maxay shirkadaha qaarkood ugu baahan yihiin naqshad labbiska xirfadeed?
Iyadoo ay sii kordheyso ku shaqeynta dharka shaqada iyo isbeddelka qaababka moodada oo marba marka ka dambeysa sii kordhayo, shirkadaha casriga ahi waxay aad iyo aad uga sii daran yihiin dharka shaqada, isla mar ahaantaana, shuruudahooda ayaa sii kordhaya oo ka sii sareeya. Tani waxay u baahan tahay caadadeena dharka shaqada ...